यो कस्तो गाईजात्रा, हरे राम !
अचम्म लाग्दछ मलाई, नेपाली नेता भनौंदाहरुको चालीमाली देख्दा । बल्ल एमआरपी छपाईको लागि फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग सम्झौता त भएछ तर कस्तो बिडम्बना एमआरपीको पानीचित्र र डिजाईनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने परराष्ट्रमन्त्रि सुजता कोईरालाले अवरोध पो सिर्जना गरिछिन् । उनी मन्त्रि हुन कि कुनै कारखानाको मजदुर ? जब आफूले भने जस्तो हुँदैन अनि अवरोध सृजना गर्ने । मलाई आज आएर थाहा भएको छ, हामी नेपाली कि पछाडी छौं र हाम्रो देश किन सधैं पछि, अन्तिम र ओरालो झरेको स्थितीमा छ । जब नेता त यस्ता छन् दुई कौडीको बुद्धि र विवेक नभएका अनि देश कसरी उभो लाग्दछ ।
मलाई त यो सुजता कोइराला भन्नीको दिमागी हालत ठिक छ जस्तो पनि लाग्दैन् । यो भारतको कती बफादार भक्त ? बरु भारतमै एउटा गतिलो केटो खोजेर घरजम गरे भैहाल्यो नि । अनि त्यतै नेतृ बने पनि हुन्छ ।
अझ देश काम चलाऊ सरकारका भरमा टिकेको पनि अब दुई महिना पुग्नै आँटेछ । थुक्क नेताहरु ! यस्ता काम गर्न नसक्नेले त .... खाए पनि हुन्छ !
मलाई त ज्ञानेन्द्र नै को शासन ठीक थियो जस्तो लाग्यो । कम्तिमा पनि मौसुफले यस्तो गाइजात्रा त देखाईबक्सेको थिएन नी । मौसुफले यी नेताहरुलाई भेला पारेर कोतपर्व रचिबक्सेको भएपनि आज हामी नेपालीले कति सन्तोषको सास फेरेका हुन्थ्यौं । मौसुफ नागार्जुन मात्र राज नहोईबक्सियोस्, बाहिर आइबक्सियोस् र शान्ति, शुसासन र विकाशका निमित्त केहि गरिबक्सियोस् ! मेरो यहि कामना छ ।